Fikarohana momba ny firaisana Fijangajangana ao amin'ny Reansarena an'ny George S. Patton | Jeneraly Amerikana James Mattis sy mpampianatra James McColl: Karazam-bolo Karma sy ny fizarana - Fikambanana momba ny fitsanganana amin'ny maty
George S. Patton | James Mattis Reincarnation Case Natolotry ny: Walter Semkiw, MD
George S. Patton | James McColl Reincarnation Case Tolo-kevitra nataon'i James McColl, Navoaka tamin'ny alalan'ny: Fahatsiarovana ny fiainana taloha tany amin'ny fahazazana sy ny fahanterana
Cases Affirmed By: Ny Fanahy Ahtun Re ao amin'ny seza Kevin Ryerson
From: Ny fiainam-piainana taloha sy ny fitambaràn'ny Jeneraly George S. Patton Jr., nataon'i James McColl
Fanamarihana: Tsindrio ny sary mba hampitomboana azy ireo
Fampidirana ny bokin'i James McColl momba ny fiainany taloha toa an'i George S. Patton, nataon'i Walter Semkiw, MD
Nifandray tamiko i James McColl taona vitsy lasa izay ary nizara tamiko fa nahatsiaro ny nahatongavan'i Etazonia tamin'ny Ady Lehibe II izy Jeneraly George S. Patton.
Rehefa nikaroka fikarohana momba ny firaisana ny vatana, dia nanambara ny olona fa manana endrika tarehy toy izany ny olona iray mandritra ny androm-piainany iray manontolo, dia nanontaniako i James mba handefa sary ho ahy. Hitako fa lasa olon-dehibe i James, ary feno tarehy izy, mifanohitra amin'ny tarehin'i Patton. Etsy ankilany, tao anaty sary nalaina tamin'ny fahazazan'i Jakôba ary ny iray tamin'izy nianatra tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa tao Jakarta ary nitafy ny fanamiana ROTC (miaramila miaramila), dia mitovy amin'ny tovovavy George Patton izy.
Nanontaniako an'i Jakôba ihany koa izay nataony ho an'ny velona, ​​satria amin'ny ankapobeny dia mikatsaka karama mitovy amin'ny fiainana iray ny olona. Nohazavainy fa mpampianatra manokana izy. Amin'izany fahaiza-manao izany dia mampianatra olona manana fahasembanana isan-karazany izy. Izany dia toa mifanohitra amin'ny karazana asa izay hataon'i Patton reincarnated.
Ny Fikarohana momba ny firazanana indray ao Gène Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia
Ny iraka voalohany ataoko dia ny hanaparitaka porofo momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao ary indrindra ny asa nataon'i Ian Stevenson, MD, satria ity fikarohana ity dia afaka manampy amin'ny fananganana tontolo milamina kokoa.
Stevenson dia mpitsabo aretin-tsaina ao amin'ny Oniversiten'i Virginia, izay nandritra ny fe-potoana nandritra ny 40 taona, dia nianatra ankizy kely izay nahatsapa fahatsiarovan-tena hafahafa izay mety ho azo ekena. Ao amin'ny andian-kavin'ireo ankizy 2500 izay notadiavin'i Ian Stevenson, dia nahitana fanamarinana tsy azo lavina ny manodidina ny 1500 tamin'ireo tranga ireo. Ny tranga ao Stevenson dia mampiseho fa ny endriky ny endriky ny endrika sy ny fitondran-tena dia mety hifanaraka amin'ny fiainan'ny iray hafa.
Fanampin'izany, ity fikarohana ity dia mampiseho izany Ny fanahy dia afaka manova ny finoana, ny zom-pirenena ary ny fiombonana ara-poko avy amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa. Ny ankamaroan'ny ady sy ny fifandirana dia mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ireo marika ara-kolotsaina momba ny maha-izy azy. Ny fahatakarana fa ireo fiovana ireo dia afaka miova avy amin'ny fampodiana iray mankany amin'ny iray hafa dia hitondra any amin'ny tontolo milamina kokoa. Ohatra miavaka amin'ny fiovan'ny finoana sy ny zom-pirenena:
Ny fiovana hafa momba ny zom-pirenena sy ny raharaha ara-pinoana dia azo jerena amin'ny:
Firaisana ara-piraisana ara-piraisana ara-nofo amin'ny fanovana ny finoana, ny maha-olom-pirenena ary ny famindram-pon'ny hafa
Ny fikarohana nataon'i Ian Stevenson dia naseho tao amin'ny bokiko, ateraka indray, ary azo jerena amin'ny:
Fahatsiarovana ny fiainana taloha voamarina ho an'ny ankizy ao amin'ny University of Virginia
Ankoatra ny fampiroboroboana ny asan'ny Ian Stevenson, niasa tamina fampahalalam-baovao mahazatra aho Kevin Ryerson, izay nasongadina tao amin'ny bokin'i Shirley MacLaine maromaro. Kevin mizara a ny fanahy antsoina hoe Ahtun Re izay nanaporofo tamiko fa manana fahaiza-manao izy hahafantarana ny fiainany taloha miaraka amin'ny hasarobidiny. Niara-niasa tamin'i Kevin sy Ahtun Re aho hatramin'ny 2001 ary hita tao amin'ny bokiko ny fikarohana nataonay ateraka indray ary Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana.
Rehefa nifandray tamiko tamin'ny tantarany i James McColl dia nanontany an'i Ahtun Re aho raha toa ka i James Patton no nampiditra an'i James. Ahtun Re nilaza tamiko fa izy dia sady namporisika ahy hiara-miasa amin'i James.
Ny fiainana taloha Karma an'ny Jeneraly George S. Patton
Nanontany an'i Ahtun Re aho raha ny fiantsoana an'i James McColl ho mpampianatra fanabeazana manokana dia mifandraika amin'ny sehatra malaza ao amin'ny sarimihetsika, Patton, izay namelezan'i George Patton miaramila iray tao amin'ny trano fitsaboana iray izay nanana fialan-tsasatra ara-tsaina na ara-pihetseham-po mifandraika amin'ny horohoron-tany. Tsy nangoraka an'io miaramila io i Patton, niantso azy ho kanosa. Ahtun Re nanamafy fa lasa mpampianatra fanabeazana manokana i James mba hanonitra ny karma naterak'i Patton tamin'ny famonoana sy fanalam-baraka ny miaramila sembana.
Famakiana ny fisarahana ao amin'ny fasana misy ny zaza vao teraka ao Patton James Mattis sy James McColl
Ny fikarohana momba ny firaisana amin'ny zaridaina, anisan'izany ny asa nataon'i Ian Stevenson, MD, dia mampiseho fa ny fanahin'ny fanahy dia afaka manandratra na mitoetra mihoatra ny vatan'ny olona iray amin'ny fotoana iray. Nantsoiko io tranga io "niparitaka, "Raha nantsoin'i Stevenson ireo" raharaha ireo amin'ny daty tsy fanao ", toy ny androm-piainan'ny olona amin'ny fotoana voafetra.
Raha nahafantatra an'izany aho dia nanontany an'i Ahtun Re ihany koa aho raha misy fisarahana an'i Patton izay nitady asa miaramila. Ahtun Re dia nilaza tamiko fa marina izany ary nozarain'izy io fa manamboninahitra malaza ao amin'ny tafika Amerikana io split io, kanefa tsy nilaza tamiko manokana izy hoe iza io olona io.
Tokony ho telo taona taty aoriana dia nanendry ny filoha Donald Trump Jeneraly James Mattis tahaka ny Sekreteran'ny Fiarovana Amerikana. Raha vao nahita an'i Mattis tao amin'ny fahitalavitra aho, dia avy hatrany dia nieritreritra avy hatrany fa i Mattis dia ny fampidirana indray an'i George S. Patton, izay nolazain'i Ahtun Re tatỳ aoriana. Mahatsiaro ny fahatsiarovana ara-batana an'i Patton sy Mattis. Jereo ny:
Tranom-pitaovam-piraisana vaovaon'i George S. Patton | James Mattis
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha nataon'i George S. Patton sy James McColl
Ny iray amin'ireo fanontaniana mahazatra ahy dia izao: "Nahoana no tsy mahatsiaro misimisy ny fiainan'ny olona taloha?" Namerina izany fanontaniana izany ho an'i Ahtun Re aho. Ny valinteniny dia hoe ny fahatsiarovana ny fiainana taloha dia azo raisina ho toy ny karazana fanomezam-pahasoavana.
George Patton dia nanana izany fahaizana izany. Ao amin'ny tononkalony malaza, Amin'ny alalan'ny Glass, Darkly, Patton dia mamaritra ny fiainam-piainana taloha ho miaramila, mpiady ary mpamono. Midika ve izany fa ny fanahin'i Patton dia hanohy hiverina indray amin'ny maha-miaramila azy? Tsy voatery ny valiny. Ny fitarihana dia azo ampiasaina ho an'ny tanjona mandringa sy mandamina.
James McColl dia manana fanomezam-pahasoavana mitovy amin 'ny fampahatsiahivana ny zava-niseho farany teo ary raha ny marina dia mahagaga ny habetsaky ny fiainany taloha. Amin'izao fotoana iainantsika izao, dia manana hery mitarika tsara amin'ny maro i James. Antenaina fa amin'ny hoavy, noho ny androm-piainana toa an'i Jakôba, ny fanahin'i Patton dia hiverina hijery sy hisaintsaina amin'ny alalan'ny fitaratra, mamirapiratra.
sombiny avy amin'ny Ny fiainam-piainana taloha sy ny fitambaràn'ny Jeneraly George S. Patton Jr., nataon'i James McColl
Ny fahatsiarovako voalohany indrindra dia miverimberina mialoha ny nahaterahako. Amin'ny maha-zana-pokontany ahy, dia tsaroako tsara ireo fahatsiarovan-tena ireo teo amin'ny sehatra ara-panahy, teo anelanelan'ny fanekena ahy eto an-tany, saingy nandritra ny taona maro, dia nihanodina tsikelikely izy ireo, ary sombintsombina sisa no tavela. Na izany aza, misy fahatsiarovana miavaka iray talohan'ny nahaterahana, izay azoko tsaroako amin'ny antsipiriany. Izany no fahatsiarovana ny fisafidianana ny ray aman-dreniko.
Tsaroako ny dia nandehandeha tany amin'ny orinasa iray hafa iray mba hijerena fianakaviana maromaro izay tokony hifantohako. Ny hany fotoana nahitako ny raibeko patriarka, James E. McColl, dia tamin'ity indray mitoraka ity. Maty izy taoriana kelin'ny nanafihan'ny aretim-po tamin'ny Desambra 14, 1968, raha marary iray tao amin'ny hopitaly tao Marion, Carolina Atsimo. Tsy teraka aho hatramin'ny Aogositra 1969.
Amin'ny maha-zaza ahy dia tsaroako ny tsipiriany momba ny fiainako teo amin'ny fiainana sy ny fiomanana amin'ny fiverenako eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsaroako fa tsy maika handeha hiverina aho, fa ny fahafantarako fa mila ny farany. Tsaroako ihany koa ireo fahitana momba ny ady, ny fandringanana sy ny faharavana ary ny fihetseham-po manaraka izay tsy te hiverina amin'ny sehatra toy izany.
Na izany aza, tamin'ny mbola kely dia tsy nahatadidy ity fitadidiana manokana ity aho na ny dikany. Indraindray aho dia nahatsikaritra ny ilana olona iray hiverina any amin'ny tontolon'ny fiainana mba hanao asa fitoriana, izay nanintona ahy ho ampy mpilatsaka an-tsitrapo handeha. Amin'ny maha-ankizy ahy, na dia niezaka aza aho dia tsy nahatsiaro velively hoe inona ilay iraka izay nanolotena ahy.
Ny fanabeazana Kristiana an'i James McColl dia fifanoherana amin'ny fiainany andavanandro
Teraka tany Laurinburg, any Caroline Avaratra aho ary nipoitra tao amin'ny tranon'ny Batista Tatsimo any atsimo, noho izany tany am-piandohana aho dia nampianarina fa ny fahafatesana dia nahatonga ny lanitra na ny helo izay tsy misy resaka mety hiverina amin'ny fiainana eto an-tany intsony. Tsy teo amin'ny taona faha-4-n'ny taona tany am-pianarako aho no nijery ny foto-pinoana momba ny vatana vaovao indray.
Ny anabaviko dia nanonona azy io nandritra ny sakafo hariva indray hariva ho lohahevitra iray izay nianarany tany am-pianarana na tany am-piandohany na kilasin'ny tantara taloha. Nandritra ny resadresaka momba ny sakafo, dia navotsotra toy ny finoana tsy kristiana izay navoakan'ny mponina indiana. Efa ela talohan'ity resaka ity dia nahafantatra aho fa niaina talohan'izay, saingy nino aho fa nalefa niverina teto amin'ity izao tontolo izao ity fotsiny aho mba hanao asa fitoriana. Nino aho fa ny fiverenako dia singa manokana fa tsy ny fitsipika.
Noho izany antony izany, nihevitra aho fa tsy tokony hilaza ny zavatra tsaroako talohan'ny nahaterahako aho. Amin'ny maha-zaza ahy, indraindray aho mieritreritra ny zavatra efa nataoko tany amin'ny lanitra indray mandeha, ary manontany tena aho indraindray raha toa ka mety hitranga ny mety ho fanamelohana ho any amin'ny helo rehefa maty aho noho ny zavatra nataoko nandritra ny androm-piainako. Ireo hevitra ireo dia nanampy tamin'ny faniriako mafy hahalala izay mitranga amin'ny olona, ​​amin'ny fahafatesana.
Na dia teraka tao amin'ny tranon'ny Batista Tatsimo aza aho, dia nahitako ny fahatsiarovako ny fahaterahako talohan'ny nahaterahako, ary ny herin'ny reniko, dia nanjary nanana fomba fijery bebe kokoa momba ny zavatra ara-panahy aho. Isaky ny maraina ny misakafo dia novakiako ny horosiny isan'andro avy tao amin'ny gazety, ary matetika no namaly ny raiko tamin'ny filazana fa tsy misy valiny ny fanandroana. Mbola tadidiko foana ny hafaliako fony aho tany amin'ny taona faharoa nanaovan'ny reniko ahy ny lahatsoratra iray tao amin'ny gazety momba ny Dr. Raymond Moody sy ny fikarohana momba ny tantaram-pianakaviana naharitra teo amin'ny fahafatesana. Tamin'io fotoana io ihany dia nolazainy tamiko ny lehilahy zokiolona atao hoe Percy Covington (1882-1961), avy any an-tanànany Mt. Ny Gilead, North Carolina dia nampiasa ny board Ouija mba handraisana hafatra avy amin'ny tontolon'ny fanahy.
Anisan'ireo zavatra niainako metafizika nandritra ny fahazazako, ny iray manokana indrindra dia nahatonga fahatsapana maharitra, noho ny fomba niavaka nisehoany. Na dia tsy azoko aza ny dikany tamin'izany fotoana izany, rehefa olon-dehibe aho dia hitako fa ny zavatra hitako tamin'io andro io dia sehatra iray tamin'ny fiainako taloha toa an'i Lovick William Rochelle Blair, (1821-1882), izay notehirizina tao anaty sary. Tamin'ny fahafatesany dia teraka indray i Blair ho George S. Patton Jr. (1885-1945). Ity manaraka ity no kaontiko momba ny zavatra niainako.
Fahitana an'ny ankizy momba ny fiainana taloha
Indray andro fahavaratra tamin'ny 1972, tamin'izaho telo taona teo ho eo, nilalao teny ivelany tany am-piadiana aho; andro mafana sy mafana aho, rehefa afaka kelikely dia nahatsiaro mafana sy nangetaheta aho. Niditra tao an-trano aho ary nangataka hosotroin-dreniko. Nametraka siny hoditra tavoahangy Tang ho ahy izy ary nitondra izany tao an-davaka, nandry teo amin'ny gorodona mangatsiatsiaka ary nanomboka nisotro azy.
Rehefa nandry teo aho dia nibanjina ny rindrina sy valindrihana; ary rehefa nilamina aho dia nandinika ny antsipirian'ny volon-tsoavaly tamin'ny hazavana kely ary ny lamina ao anaty voan'ny felam-boninkazo kesika. Tany ambadika dia henoko ny famantaranandro taloha Ansonia talantalana; izay nipetraka tamin'ny akanjo lava, kitiho ny minitra rehetra. Nifantoka tamin'ny sary teo amin'ny rindrina ny fifantohako avy eo. Voalohany, ny masoko niantehitra tamin'ilay sary lehibe, izay nahantona teo ambadiky ny sofa; fanehoana tandavan-tendrombohitra Soisa. Avy eo natodiko ny masoko tamin'ilay sary teo amin'ny rindrina ankavia, dia fanontana Otto Kuhler Big Mountains, Fitaovana kely. Nijery azy vetivety aho, nitazona ny lokony sy ny antsipirihany.
Ny sary hosodoko iray dia tonga amin'ny fiainana
Tampoka teo; raha nijery azy aho dia velona ny sary, nanomboka nihodina ny kodia tamin'ny motera, ary nanomboka nihetsika nidina ny lamasinina ny lamasinina; setroka mipoitra avy amin'ny setroka. Ny habaka ambadiky ny fitaratry ny sarin'ny sary dia nanomboka nameno setroka; toy ny zavona matevina mihosinkodina, manafina ny fahitako ny lamasinina amin'ny farany. Na dia tamin'ny fahatanorako toy izao aza dia fantatro fa nahita zavatra tsy ananan'ny olon-tsotra aho, koa noho ny fahalianana sy fahalianana mafy dia nanohy nijery aho nefa tsy nihetsika, na nibanjina ny masoko. Avy eo; toy ny zavona, nisondrotra tsimoramora izy io, fa ny naharihary dia tsy sehatry ny lamasinina mandalo tendrombohitra intsony.
Ny sary dia niova ho efitrano fandefasana an-trano, taona vitsivitsy taty aoriana, hoekeko ho toy ny fanjakan'ny Amerikanina. Tamin'ny voalohany dia tsy nisy olona tao amin'ilay efitrano. Avy eo dia niditra an-tsehatra ny vondrona iray, nanao akanjo fitafin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Nivory nanodidina ny latabatra afovoany izy ireo, izay nijoro teo anoloan'ny fatin-tsoratry ny sekretera mahogany. Rehefa teo amin'ny toerany avy ny tsirairay dia nitsahatra ny fihetsiketsehana rehetra, ary nivadika ho toy ny sary ilay sary.
Te hanana olon-kafa hanatri-maso an'io fisehoan-javatra io ankoatry ny tenako aho, koa niantso ny reniko aho mba hahita azy. Nahatsapa aho fa razambeko ireo olona ireo ary nanantena aho fa hahafantatra azy ireo ho ahy koa izy ireo. Tao an-dakozia izy, ary namaly fa eo am-panatanterahana zavatra iray izy, ary tsy afaka nijanona tamin'izany fotoana izany.
Rehefa nieritreritra ny rahavaviko fa tao amin'ny efitranony, dia nanontaniako ny reniko hoe: “Aiza i Trudy?” Namaly izy fa nandeha nilalao tao an-tranon'i Phillip Tucker namany i Trudy.
Manontany tena aho, raha mahita izay mety hitranga manaraka, ary tsy te halahelo na inona na inona, nanohy nandry teo aho ary nifantoka tamin'ilay sary ny saiko. Tao anatin'ny minitra vitsy dia nanomboka niforona ny zavona toa setroka, na setroka fotsy, tao aorian'ny fitaratry ny sary, mandra-pahitako ny olona nivory manodidina ny latabatra. Rehefa nihodina izy dia nanomboka nipoitra ny loko. Rehefa nihahery ny fihodinan'ny loko manjavozavo dia nibanjina indray ny sarin'ny fiaran-dalamby namakivaky ny tendrombohitra aho.
Tao anatin'ny segondra vitsy dia niditra tao an-davaka ny reniko ary nanontany hoe: "Inona no tianao ho hitako?" Niezaka nitantara ny zava-nitranga aho, saingy tamin'ny voambolana voafetrako, sarotra izany. Ny tsara indrindra azoko natao dia ny nilazako taminy fa niova ny sary avy tao anaty fiaran-dalamby ho sarin'olona sasany miakanjo amin'ny fomban'ireo olona amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra Bonanza ary Gunsmoke; ny hany tokana nanondro ny vanim-potoana Victoriana izay fantatro tamin'io fotoana io.
Ilay sary izay naseho tamiko dia toa tsy nisy dikany tamin'io fotoana io. Ny nahavariana ahy dia ny fahitana ilay sary tonga teo amin'ny fiainana, ary niova tamin'ny sehatra iray hafa. Fotoana fohy dia nanontany tena aho hoe mety ho velona daholo ny sary rehetra ary hiovaova isaky ny seho iray, rehefa tsy misy mijery, mitovy amin'ny fomba filalaovana ilay sarimihetsika Toy Story aseho. Ary farany, nanapa-kevitra aho fa ity tranga ity dia tsy manam-paharoa amin'ny fanontana Otto Kuhler. Nino aho fa sary majika io. Nandritra ny taona vitsivitsy, dia nipetraka aho indraindray ary nijery azy nandritra ny minitra roa ary nanantena fa ho hitako fa miova indray ilay izy, saingy tsy nisy mihitsy.
Nandritra ny fahazazako, dia niaina zava-niseho aho noho ny tsy fahampian'ny teny tsara kokoa, noheveriko ho toy ny mijery televiziona ao an-tsaiko, saingy amin'izao andro izao fantatro fa antsoina amin'ny andro taloha ny fahatsiarovana azy. Nandritra io fotoana io ihany tamin'ny fahazazako, dia nanana nofinofiko aho ankehitriny izay tsapako fa nodiaviko indray ny fisehoan-javatra tamin'ny fiainana taloha. Tamin'izaho mpianatra mpianatra tany amin'ny oniversite dia nanomboka namaky boky momba ny traikefa nahafatesana olona aho ary niresaka momba ny zavatra novakiako tamin'ny raiko indraindray.
Faniriana hahita fiainana taloha Fianakaviana
Tao anatin'ny iray tamin'ireo resadresaka nataony no nanolorany hevitra aho mba hahafahako mamaky momba izany Edgar Cayce. Izany no nahatonga ahy hanana fahatakarana tsaratsara kokoa ny zavatra niainako nandritra ny fahazazana, ary miaraka amin'ny boky, Amin'ny fotoana sy ny fahafatesana, nataon'i Jenny Cockell, no nampahatsiahy ahy ny faniriana hamantatra ny maha-izy ahy amin'ny fiainana taloha. Tamin'ny fahavaratry ny 2002, fahatsiarovana ny fampanantenana nataoko tamin'ny maha-zanaka ahy, ka raha olon-dehibe indray aho no nahita ny fiainako taloha teo aloha ary nampahafantarin'izy ireo fa velona aho, dia nanapa-kevitra ny hamantatra ny fiainako taloha aho.
Tamin'ny faran'ny fahavaratra dia tsy nanana vintana aho ary nanomboka nihevitra fa tsy hanao izany mihitsy aho. Farany, tamin'ny volana oktobra, dia nisy fiantraikany tsy nampoizina aho ary nahita ny fiainako taloha. Taona vitsivitsy sisa no nandalo ary indray andro raha nijery tao amin'ny trano fivarotam-boky iray aho dia nandeha namakivaky boky iray tamin'ny lohatenin'ny Ahoana ny fomba hamelarana ny fiainanao taloha?. Ity boky ity dia nanentana ahy hanohy ny fitadiavako ny maha-izy ahy amin'ny fomba niainako tamin'ny lasa, ary farany dia nahatonga ahy hahita ny fiainako taloha tamin'ny Jeneraly George S. Patton Jr.
Fahatsiarovana ny fiainan'ny ankizy tamin'ny fahatsiarovana an'i George S. Patton
George S. Patton miresaka any Los Angeles
Rehefa nanomboka nikaroka ny fiainan'i General Patton aho, ny zavatra voalohany nahatsikaritra ahy dia ny horonantsary horonantsarin'ny kabary nataony tany Los Angeles tamin'ny 9 1945 tamin'ny XNUMX. Niaina izany toe-javatra izany aho tamin'ny fahitana iray nananako nandritra ny fahazazako, raha nipetraka teo amin'ny latabatra fisakafoana aho indray hariva niandry ny reniko mba hamita ny sakafo ary hiantso ny sisa tavela amin'ny latabatra ho an'ny sakafo hariva. Na izany aza, tamin'ny mbola kely, tsy nieritreritra aho hoe inona moa izany no niainako / nahatsiaro / namelona ahy.
Avy amin'ny fahitana aho dia tsaroako fa nampidirin'ny lehilahy iray izay azoko fantarina ankehitriny Jeneraly Jimmy Doolittle, ary nitsangatsangana, nanakaiky ny mikrô, ary nijery ny vahoaka be niteny. Mihaino ny kabary ao amin'ny YouTube, mino aho fa mitovy ny feon'ny Jeneraly Patton sy ny feoko manokana; Ny fahasamihafana, angamba, ny fisehony, noho i Patton izay teratany avy any Kalifornia ary ny zava-niainako hatramin'izay dia niaina tany Carolinas aho.
Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha momba ny fanafihana an-dranomasina ary niparitaka tamin'ny Paint Yellow
Amin'ny maha-tanora ahy dia nanana nofinofiko, izay hitako aho, dia zavatra niainan'ny fiainan'i General Patton. Nitranga ny nofinofy tamin'ny tapany faharoa ka hatramin'ny 1990. Tamin'izany fotoana izany, dia teo amin'ny roapolo taona aho. Raha nanomboka ny nofinofiko, dia tao anaty sambo kely aho na fiaramanidina teny amoron-dranomasina mavesatra sy marefo. Navoaka ny sambokely kely, ary nahatsapa aho fa afaka fotoana fohy dia afaka nesorina mora foana avy tany amin'ilay sambo sy tany an-dranomasina. Misy ny ady ary maro ny asa tanana sy sambo lehibe. Toa tafahoatra ny rano.
George Patton eo ankavia, mitafy fiarovan-doha, miaraka amin'i Admiral Hewitt ao amin'ny USS Augusta
Ny sambokely sasako dia misintona eo akaikin'ny sambo lehibe iray, ary na dia eo aza ny fepetra dia azoko atao ny manamboatra ny tadim-pitariko amin'ny sambo. Fotoana fohy taty aoriana dia nitsangana teo am-baravaran'ny sambo niaraka tamin'ny lehilahy vitsivitsy aho. Nijoro teo akaikin'ny lamasinina izahay nijery ny morontsiraka, nijery ny ady. Tadidiko fa manana bierôkôla aho, ka indraindray aho no mitandrina ny asa.
Rehefa nijoro teo izahay, dia gaga izahay raha nisy sambo lehibe iray nakambana tao amin'ny seranana ka nitifitra anay. Nieritreritra izahay fa tsy afaka niady tamin'ilay sambo ilay sambo ary tsy natahorana. Nandre izany afo izahay ary nahita ny setroka nivoaka avy teo am-bavan'ny iray tamin'ireo basy lehibe. Ity no ampahany mampihetsi-po indrindra amin'ny nofy. Tsaroako foana ny mieritreritra fa efa saika maty aho rehefa tonga ny lasibatra. Efa ampy ny fotoana hieritreretako fa ho faty aho, saingy tsy ampy ny fotoana hialana amin'ny toerana nipetrahako, teo anelanelan'ny fotoana namoahana ny akorandriaka sy ny fotoana nanosehana azy.
Ny akorandriaka dia namakivaky ny sisin'ny sambo, teo ambanin'ilay toerana nisy ahy. Rehefa vita izany, dia niparitaka tamin'ny ranomasimbe aho ary toa niseho tamin'ny loko maitso mavo. Nihevitra aho fa ho fotoana farany iainako izany, gaga aho ary navotsotra mba ho vaky tanteraka. Nanatona ahy ny zatovolahy iray ary nanolo-tena hanampy ahy hanadio sy hanamaivana ny loko sy ny rano avy amin'ny akanjoko, saingy nolaviko tamim-pihetseham-po sy nihomehezako ilay korontana. Avy eo dia niverina tao amin'ny efitranoko aho mba hanadio ny tenako. Amin'izao fotoana izao dia nifarana ny nofiko ary nifoha aho. Mbola tadidiko foana fa nifangaro ny andro manontolo taorian'ny fifohazana tamin'ity nofy manokana ity. Nahatsiaro ho toy ny hoe manana poti-basy miaraka amin'ny fahafatesana aho.
Taorian'izay, naveriko tao an-tsaiko ilay nofinofiko, ary niezaka ny hamantatra ny antony nanomanako izany nofy izany. Tena nofinofy marina sy tsipiriany izany, afa-tsy ny nipoitra ny akorandriaka ary tsy novonoina, nokorokoroko tamin'ny loko mavo aho, izay toa nitovy tamin'ny zava-nitranga tao anaty sariitatra Looney Tunes.
Ny valiny azo tsoahina hitako dia ny traikefa nananako tao amin'ny Navy ROTC raha mpianatra iray tao amin'ny kilasy 9th. Nandeha an-tongotra nankany Patriots Point aho tany Charleston, Carolina Atsimo, izay tranombakoka amoron-dranomasina sy maritika izay misy fiaramanidina roa tena saro-pady II. ny mpiara-dia USS Yorktown ary ny mpandringana USS Laffey. Ny sambo izay nijoro tamin'ny nofiko rehefa nieritreritra aho fa ho faty dia nampahatsiahy ahy ny USS Laffey.
Rehefa nikaroka ny Jeneraly Patton aho, dia gaga nahita fa zava-niainana tena izy teo amin'ny fiainany izany. Nitranga tamin'ny volana 8 tamin'ny 1942 tamin'ny naha-tafika jeneralin'ny Jeneraly Patton azy ireo ny fanafihana amoron-dranomasin'i Afrika Avaratra. Ny Jeneraly Patton dia nijoro teo am-baravaran'ny USS Augusta raha ny sambo frantsay, Jean Bart, nipoaka izany, ka nahatonga an'i Patton ho raraka tamin'ny loko mavo. Frantsa tamin'izany fotoana izany dia tsy tao anatin'ny Western Alliance
Fahatsiarovana ny fiainana taloha momba ireo miaramila mitaiza
Ny asan'ny Jeneraly Patton dia saika tratran'ny fipoahana roa nipoitra tamin'ny Aogositra 1943 nandritra ny fampielezan-kevitr'i Sicily. Nandritra ny androm-piainany teo amin'ny fiainany, ny Jeneraly Patton dia nibitsibitsika tamin'ny aloky ny aloky ny fisian'ireo tranga roa ireo izay tsy naharesy azy intsony ary nanilikilika sy nanararaotra ny miaramila roa, izay nijaly tamin'ny fatotra. Taorian'ny nahitako ny fiainako taloha toa an'i George S. Patton Jr. dia nahatsikaritra aho fa efa nahita maso ny iray amin'ireo zava-nitranga nahatsiravina tao anatin'ny fotoana fohy niainako taloha nahatsiaro ny fahitana nananako nandritra ny fahazazako. Niaina ny fahitana aho teo anelanelan'ny volana Aogositra 1973 sy ny Desambra 1975.
Nitranga izany indray andro, raha nilalao tao an-dakozia ny tranon'ny ray aman-dreniko aho rehefa nipetraka tao Garner, North Carolina. Raha tokony ho izy, rehefa nijery ny zava-niseho tamin'ny mason'i Patton aho, dia niaina izany tamin'ny olona fahatelo, toy ny hoe mijery fahitalavitra ao an-tsaiko. Ankehitriny rehefa olon-dehibe, nahita ny zava-nitranga tampoka tao amin'ilay sarimihetsika Patton, Azoko lazaina fa nosoratana tsara izany, satria mifanaraka tsara amin'ny zavatra niainako tamin'ny fahitako.
Tamin'izany fotoana izany dia niaina ilay fahitana aho fa tsy fantatro fa nitory zavatra niainana tamin'ny fiainako taloha aho. Tamin'izaho mbola kely dia nieritreritra aho fa nahita zavatra izay mitranga any amin'ny toerana iray manerana an'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Tsy nahatsikaritra aho fa efa nitranga telo taona talohan'izay izy io. Tsy nanana fahatsapana ara-tantara ho azy io izy io.
Ny raiko dia nijery ny CBS Evening News miaraka amin'i Walter Cronkite isaky ny hariva ary nihevitra aho fa mety ho hita ao amin'ny vaovao ny zavatra hitako. Raha tsaroako ny nijery ny vaovao tamin'ny naha zazakely dia toa miresaka momba an'i Vietnam sy Watergate foana i Walter Cronkite. Ny sary hitako hitako tao amin'ny fahitako dia miaramila, ka nifanandrify tao an-tsaiko ireo zava-nitranga tao Vietnam izay hitako tao amin'ny vaovao. Tsaroako fa nampatahotra ahy ny fahitana, satria tezitra mafy ilay lehilahy, namely ny miaramila ary nisintona ny pistola teo amin'ilay lehilahy ary nitady hisambotra azy.
Raha ny fahitako azy dia heveriko fa avela hitranga amin'ny olona fahatelo aho, hatramin'ny naha zazakely ahy, ary nisy sehatra goavana sy mampatahotra toy izany. Mbola tadidiko foana hoe oviana ilay fahitana no nihevitra fa tena tezitra be ilay lehilahy hitako, ary nanontany tena ny antony nanehoako io seho manokana io.
Fifandraisana amin'ny fiainana taloha
Porofo iray hita maso, ilaina amin'ny fametrahana ny mombamomba ny fiainana taloha, dia ny Ny endrik'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona fanahy iray dia ny olona izay nahazoan'ny olona iray fikambanana nifanelanelana nandritra ny androm-piainany.
Mifototra amin'ny tsy firaharahiana ny rafitrano fombam-panatanjahantena ho an'ny hafa, mino aho fa i Neny Wilson, izay anabavin'ny renin'i General Patton, ny reniko. Toy ny reny faharoa mankany Georgie izy. Annie Wilson dia maty tamin'ny novambra 26, 1931 ary ny reniko; Margret Frances Parsons dia teraka tamin'ny Desambra 27, 1937. Mariho manokana ny fomba nanatontosana ny endriky ny sofina ankoatra ireo endrika hafa, rehefa niangona tamin'i Margaret F. Parsons i Annie Wilson. Kevin Ryerson dia nanamafy fa ny reniko dia ny fiverenana indray ao amin'ny vovoka indray an'i Annie Wilson.
Ny fiainana taloha Talenta toy ny mpihazakazaka mpihaza
Ny Jeneraly Patton dia fantatra ho mpilalao lehibe. Nampitandrina ahy hatrany ny reniko foana momba ny loza ateraky ny basy. Rehefa nanakaiky ny faha-12 taonako aho, dia te hahazo basy. Tamin'izay fotoana izay dia maro tamin'ireo namako tsara no nananako, na nahazo iray. Niadana ny ray aman-dreniko ka navelany hanana iray monja aho, eritreritro fa afaka misintona ny masoko aho, na ny varavarankelin'ny mpifanolobodirindrina amiko. Farany dia navela hividy iray aho. Faly be aho rehefa tonga ny andro.
Nentin'ny raiko tany amin'ny K Mart ny toerana ary nividy Daisy BB aho sy basy. Gaga aho nahita fa mpilalao marani-tsaina kokoa noho ireo namako izay nitifitra lavitra noho izaho. Toa tonga ara-dalàna amiko izany. Tsaroako fa niampita ny sainiko izy tamin'ny fotoana izay mety ho fahaizana nianarako teo amin'ny fiainako taloha, mety ho mpisava lalana tany Amerika tany am-piandohana rehefa napetraka ny firenena. Izany no fotoana voalohany nandraisako ny hevitry ny hoe teraka indray ao amin'ny vatana vaovao indray.
Fiainam-piainana taloha teo amin'ny jiro manaitra iray teo amin'ny fiainan'i George Patton
Jeneraly Pershing sy George Patton nanadihady ny miaramila tao amin'ny Expedition Punit tany Meksika
Iray amin'ireo fihetsika misy eo amin'ny fiainako ankehitriny sy ny fiainako taloha ny Jeneraly Patton dia misy jiro ho an'ny lasantsy manerantany. Tamin'izaho dimy na enin-taona teo ho eo, nanana nofinofiko aho, izay fantatro ankehitriny dia tamin'ny zavatra niainako tamin'ny Patton nandritra ny Meksikana fialan-tsasatra amin'ny 1916. Tao anatin'ny nofy, niditra tao anaty lay aho. Maizina aho, noho izany dia manazava jiro iray aho ary manjavona eo amin'ny tarehiko izy ary mametraka ny tenako ho toy ny lay ao anaty afo. Avy eo dia miala haingana avy eo amin'ny tranolay fandoroana aho ary mamoaka ny afo.
Amin'izao fiainako izao dia manangona zavatra fahagola aho ary nanao izany hatramin'ny faha-valo taonako. Amin'ny maha mpianatry ny lisea sy ny oniversite ahy dia nahafinaritra ahy ny nankany amin'ny tsenan'ny Flea Florence ary nitady fahagola. Tamin'ny dia iray toy izany dia nividy jiro lasantsy Coleman Quick-Lite fahagola aho. Fotoana fohy taorian'izay dia fantatray sy ny raiko fa azo alefa any amin'ny Coleman Company izany ary averina miasa. Nandefa azy izahay ary niverina niaraka tamin'ny paompy hanerena azy io. Nanontany ahy ny raiko raha tiako ny voninahitry ny fikosehana azy sy hanazava azy. Nandà aho ary nangataka azy hanao izany.
Tsy tonga tao an-tsaiko ny nofiko tamin'izay fotoana izay, saingy nanana tahotra ny jiro nipoaka teny amin'ny tarehiko, izay nanakana ahy tsy hibanjina izany. Taona maro taty aoriana rehefa nanomboka nanadihady ny fiainako taloha aho dia nahita ny filazan'i Patton momba ny jiro nipoaka teny amin'ny tarehiny. Noraisiko ho toy ny antsipiriany amin'ny antsipiriany ny nofiko. Na izany aza rehefa nividy ny jiro aho ary tsy afaka nanazava ny tenako taty aoriana dia tsy nampifandraisiko tamin'ny nofy izany. Raha tsy namaky ny filazan'i General Patton momba ny zava-nitranga aho dia tsapako tamin'ny farany fa mifamatotra izany. Patton dia nanoratra ireto antsipiriany manaraka ireto tao anaty taratasy ho an'ny vadiny.
Niverina avy eo amin'ny sarimihetsika aho ary manana asa kely mba hanangonako ny jiroko sy hamela azy. Tsy nirehitra tsara izy ka nanomboka niposaka indray aho rehefa nirehitra ilay izy. Be dia be loatra ny solika tao anatiny ka dia nijanona aho rehefa nijanona tsy nipoaka intsony ny solika fa tsy ny rivotra sy ny afo. Rehefa tonga izy dia namely ahy ny tarehy ary niditra tao amin'ny voloko. Nihazakazaka teny ivelany aho ary nipoitra. Avy eo dia niverina izy ary nametraka ny jiro sy ny lay. Avy eo aho dia nitatitra tamin'ny General Pershing fa nodorana aho ary nankany amin'ny hopitaly.
James, amin'ny maha-zaza azy, dia mangataka fiara antique iray mitovy amin'ny Patton iray nampiasaina tao amin'ny fampielezan-keviny Meksikana
Tiako hatrany ny fiara mifono fahagola. Fony aho telo taona teo ho eo dia nanontany ahy ny Bebe McColl ahy hoe inona no tadiaviko amin'ny Noely. Novaliako ny fiara Beverly Hillbillies, izay tamin'ny fahatanorako dia ny famaritana tsara indrindra ahy momba ny fiara efa antitra hatramin'ny voalohan'ny taonjato faha-20.
Takatr'izy ireo ny zavatra tiako ary nomeny fiara nitondra fiaramanidina Model T aho. Tonga saina aho fa toy ny fiara fitaterana antitra antonontonona ny renibeko no nanome ahy ny fiara fiara 1915 Dodge izay i Patton, tamin'ny May 14, 1916, no nitarika ny fanafihana voalohany nataon'izy ireo tamin'ny tantaran'ny ady tany Etazonia. Ny zava-nitranga dia namarana ny famonoana Julio Cárdenas ary ny roa tamin'ireo mpiambina azy. Izany koa dia nahatonga an'i Patton nandefa filazam-baovao maro be ary nahazo ny fankasitrahan'ny Jeneraly Pershing.
Ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona tany Patton izay niverimberina tamin'ny fiainan'i James McColl
Ny lozam-pifamoivoizana nahafatesan'ny Jeneraly Patton tamin'ny Desambra 9, Xnumx dia toa misy fitoviana maromaro amin'ny fiampangan'ny lozam-pifamoivoizan'ny November 1945, 8. Amin'ireo tranga roa ireo dia mitovitovy amin'ny loza ny loza. Ny fiara iray manakaiky ny lalana mifanohitra amin'izany dia nanao tampoka tampoka sy tsy nampoizina, ka nitondra azy mivantana teo amin'ny làlan'ny fiara izay nandefasan'ny General Patton mpandeha.
Toy izany ihany koa ny loza vokatry ny kamiao iray izay manakaiky ny lalana mifanohitra amin'izany, izay manao tampoka tampoka sy tsy ampoizina ary mitondra azy mivantana eo amin'ny làlan'ny fiarako. Tahaka ny nataon'ilay mpamily Jeneraly Patton, dia avy hatrany dia tonga teo am-baravarana aho, saingy mbola nifandona tamin'ny kamiao. Amin'ny toe-javatra roa, ny rindrina eo ankavanan'ilay kamiao dia namely ny anoloan'ilay fiara. Ny faran'ny endriky ny 1938 Cadillac Jeneraly Patton dia nopotehina tamin'ny loza. Tahaka izany koa, ny faran'ny fenitra 1968 Falcon dia nopotehina ihany koa.
Ny Jeneraly Patton dia tsy nanao fitifirana satria tsy fiara fitaterana fiarovan-tena izy ireo hatramin'ny taona maro taty aoriana. Nesorina i Patton, nokapohiny ny lohany ka tapaka ny tendany. Nanao fehikibo fehiloha aho nefa tsy notapahina ny soroka, ary natsipy tany an-damosiny ny lohako teo ambony girany, fa ny fehiloha kosa nanakana ahy tsy nahasakana ahy tsy hanimba ratra. Ny fiantraikany dia nipoaka ny hoditro ka nahatonga azy nitsoka ny lohako nifaneraseran'ny rivotra, toa ny Jeneraly Patton izay nidona tamin'ny loha ny ratra nahazo azy tamin'ny loza.
Ny fiantraikan'ny fifandonana dia nanosika ny vavahady teo amin'ny vavahady falcon Falcon roa, ka tsy afaka nosokafako izy roa. Izany no nahatonga ahy tsy maintsy niampita ny seza teo aloha ka nivoaka ny fiara tamin'ny alàlan'ny varavarana ambadika iray, mitovy amin'ny Jeneraly Patton tsy maintsy nesorina tao Cadillac taorian'ny lozam-pifamoivoizana nataony tamin'ny alàlan'ny varavarana ambadika iray. Mahaliana ny manamarika fa ny lokon'ny fiaran'ny mpiasan'ny jeneraly Patton dia lozam-pifamoivoizana ary maitso maitso misy tampony fotsy ny Falcon-ko 1968. Ireo kintana fotsy lehibe roa nolokoina tamin'ny fiaran'i Patton dia mifanaraka amin'ny loko fotsy amin'ny tampon'ny fiarako.
Ho an'ny tantara feno momba ny fahitana sy ny fanamarinana ny fiainako taloha toa ny General Patton, ary koa ny enina lasa taloha, dia vakio azafady ny bokiko, Ny fiainam-piainana taloha sy ny fitambaràn'ny Jeneraly George S. Patton Jr.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: James McColl, tamin'ny fahatanorany, dia sahala amin'ny tovolahy George Patton.
Ny fiainana taloha talenta: Patton sy James McColl dia samy naneho ny fanomezam-pahasoavana hitadidy ny fiainany taloha.
FAMPIANARANA SY FIVORIAM-BOLA novolavola tamin'ny alalan'ny fanambadiana: James McColl dia nanondro ny reniny ho ny vatana vaovao ao amin'ny nenitoan'i Patton, Annie Wilson, dia toy ny renin'i Patton faharoa.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: James McColl sy James Mattis dia nalaina tamin'ny fanahy iray ihany, tranga iray nantsoiko hoe "fahatongavan'ny nofo nofo" ary i Ian Stevenson, MD nantsoina hoe "tranga nisy daty tsy ara-dalàna," satria nifandona tamin'ny fotoana rehetra. James Mattis dia teraka tamin'ny 1950, raha i James McColl kosa teraka tamin'ny 1969, noho izany dia nisy 19 taona nifanindriana.